ဆွဲဆောင်မှု ရှိတဲ့ အမူအရာလေးတွေ နဲ့ ပရိသတ်တွေ ချစ်အားပိုအောင် အထာကျကျ ပို့စ်ပေးနေတဲ့ အေးမြတ်သူ – Let Pan Daily
ဆွဲဆောင်မှု ရှိတဲ့ အမူအရာလေးတွေ နဲ့ ပရိသတ်တွေ ချစ်အားပိုအောင် အထာကျကျ ပို့စ်ပေးနေတဲ့ အေးမြတ်သူ
Let Pan | August 14, 2020 | Celebrity | No Comments
ပရိသတ်ကြီးရေ မင်းသမီးချော အေးမြတ်သူ ကတော့ အနုပညာလောကမှာ ပရိသတ်တွေအားပေးချစ်ခင်မှုတွေကို ရယူသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူမရဲ့ သရုပ်ဆောင်ပိုင်းကလည်း ကျရာဇာတ်ရုပ်ကို အကောင်းဆုံးနဲ့ သဘာဝကျကျ ပီပြင်အောင် သရုပ်ဆောင်နိုင်တာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အကောင်းဆုံး ကြိုးစား အားထုတ်မှုတွေကြောင့်လည်း အကယ်ဒမီဆုကို ထိုက်ထိုက်တန်တန် ရရှိခဲ့တဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ယနေ့အချိန်ထိ အေးမြတ်သူက နုပျိုနေဆဲ ဖြစ်ပြီး သူမရဲ့ ပင်ကိုယ်အလှတရားတွေကတော့ ဆယ်ကျော်သက်တွေ အရှုံးပေးရလောက်ပါတယ်။ ယခုမှာဆိုရင်လည်း အေးမြတ်သူ က ပရိသတ်တွေ ချစ်အားပိုလောက်မယ့် ပုံရိပ်လေးတွေကို တင်ပေးလာခဲ့ပါတယ်။ ဒီပုံလေးတွေထဲမှာတော့ အေးမြတ်သူက လွတ်လပ်ပေါ့ပါးတဲ့ဖက်ရှင်ဝတ်စုံလေးနဲ့ ဆွဲဆောင်မှု ရှိရှိ အထာကျကျ ပို့စ်ပေးနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီပုံလေးတွေ နဲ့လည်း အေးမြတ်သူ က “ဒီတစ်ခါ…ခပ်ဆိုးဆိုး အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ပါ……အမြဲတမ်းလိမ္မာနေတဲ့အခါ…..ဆိုးခွင့်မရတော့မှာ စိတ်ပူလို့…. ကိုယ် မင်းအချစ်တွေကိုယုံကြည်လို့…. တစ်ခါတစ်ရံခပ်ဆိုးဆိုးအမျိုးသမီးတစ်ယောက်လည်း…. ဖြစ်နေတတ်တယ်….. ခွင့်လွှတ်ပေးနော် ချစ်ရ သူတို့နဲ့ သဘောထားချင်းမတိုက်ဆိုင်ခဲ့ရင် လည်း…..ခွင့်ပြုပေးပါ.. ” ဆိုပြီး ရေးသားထားပါသေးတယ်။ ကဲ…ချစ်ပရိသတ်ကြီးရေ ခပ်မိုက်မိုက် ပုံစံလေးနဲ့ ချစ်စရာကောင်းလောက်အောင် ပို့စ်ပေးနေတဲ့ အေးမြတ်သူရဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေကို ပြန်လည်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
Source – Aye Myat Thu fb account
ဆှဲဆောငျမှု ရှိတဲ့ အမူအရာလေးတှေ နဲ့ ပရိသတျတှေ ခဈြအားပိုအောငျ အထာကကြ ပို့ဈပေးနတေဲ့ အေးမွတျသူ
ပရိသတျကွီးရေ မငျးသမီးခြော အေးမွတျသူ ကတော့ အနုပညာလောကမှာ ပရိသတျတှအေားပေးခဈြခငျမှုတှကေို ရယူသိမျးပိုကျနိုငျခဲ့ပွီလညျးဖွဈပါတယျ။သူမရဲ့ သရုပျဆောငျပိုငျးကလညျး ကရြာဇာတျရုပျကို အကောငျးဆုံးနဲ့ သဘာဝကကြ ပီပွငျအောငျ သရုပျဆောငျနိုငျတာကိုလညျးတှရေ့ပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ အကောငျးဆုံး ကွိုးစား အားထုတျမှုတှကွေောငျ့လညျး အကယျဒမီဆုကို ထိုကျထိုကျတနျတနျ ရရှိခဲ့တဲ့ အနုပညာရှငျတဈယောကျပဲဖွဈပါတယျ။
ယနအေ့ခြိနျထိ အေးမွတျသူက နုပြိုနဆေဲ ဖွဈပွီး သူမရဲ့ ပငျကိုယျအလှတရားတှကေတော့ ဆယျကြျောသကျတှေ အရှုံးပေးရလောကျပါတယျ။ ယခုမှာဆိုရငျလညျး အေးမွတျသူ က ပရိသတျတှေ ခဈြအားပိုလောကျမယျ့ ပုံရိပျလေးတှကေို တငျပေးလာခဲ့ပါတယျ။ ဒီပုံလေးတှထေဲမှာတော့ အေးမွတျသူက လှတျလပျပေါ့ပါးတဲ့ဖကျရှငျဝတျစုံလေးနဲ့ ဆှဲဆောငျမှု ရှိရှိ အထာကကြ ပို့ဈပေးနတော ဖွဈပါတယျ။
ဒီပုံလေးတှေ နဲ့လညျး အေးမွတျသူ က “ဒီတဈခါ…ခပျဆိုးဆိုး အမြိုးသမီးတဈယောကျပါ……အမွဲတမျးလိမ်မာနတေဲ့အခါ…..ဆိုးခှငျ့မရတော့မှာ စိတျပူလို့…. ကိုယျ မငျးအခဈြတှကေိုယုံကွညျလို့…. တဈခါတဈရံခပျဆိုးဆိုးအမြိုးသမီးတဈယောကျလညျး…. ဖွဈနတေတျတယျ….. ခှငျ့လှတျပေးနျော ခဈြရ သူတို့နဲ့ သဘောထားခငျြးမတိုကျဆိုငျခဲ့ရငျ လညျး…..ခှငျ့ပွုပေးပါ.. ” ဆိုပွီး ရေးသားထားပါသေးတယျ။ ကဲ…ခဈြပရိသတျကွီးရေ ခပျမိုကျမိုကျ ပုံစံလေးနဲ့ ခဈြစရာကောငျးလောကျအောငျ ပို့ဈပေးနတေဲ့ အေးမွတျသူရဲ့ ပုံရိပျလေးတှကေို ပွနျလညျဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။
ဘာလူမြိုး လဲ လာလာ မေးနေ လို့ ပွနျဖွပေေး လိုကျတယျ ဆိုတဲ့ “နနျးမှစေံ”
ပုဝါလေး ခြှတျခြ ပွီး နောကျပိုငျး အလှကို ထုတျပွ လိုကျတဲ့ သဇငျဦး (ဗီဒီယို)
အိမ်ကခွေးလေးတွေ ကို နိုင်းဝမ်း နဲ့ ယုန်လေး ဆိုပြီး နာမည်ပေးထားတဲ့ ပိုးကြာဖြူခင်ကြောင့် ရေတောင်သီးတယ် ဆိုတဲ့ နိုင်းဝမ်း
ကိုယျကပျြ အကငြ်္ီလေး နဲ့ ဆှဲဆောငျ မှု ရှိတဲ့ အလှတရားတှေ က ပျေါလှငျနပွေီး ရငျသပျရှု မောရလောကျ အောငျလှပနေ တဲ့ နခွေညျဦး